Iwu m ato banyere agbụrụ, okpukperechi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Mmekọahụ na nnabata | Martech Zone
Saturday, April 14, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Akụkọ banyere Imusi izu a akpalitewo mkparịta ụka nke ukwuu ma ọ masịrị m iso ndị enyi m na ndị ezinụlọ m kerịta echiche m. Ebe m bụ nna, ana m akpachapụrụ anya etu m si azụ ụmụ m ihe. Ọ bụ nnọọ eziokwu na ịkpa ókè agbụrụ na ịkpa ókè agbụrụ si n'aka ndị nne na nna nye ụmụ ha.
Iwu M Atọ:
Agaghị m aghọta. Dika nwoke, aghotaghi m ihe ibu nwanyi. Dị ka onye ọcha, Agaghị m aghọta ihe ọ dị ka mmadụ pere mpe. Dị ka nwoke kwụ ọtọ, Agaghị m aghọta ihe ọ dị ka nwoke idina ụdị onwe. Dịka Onye Kraịst, Agaghị m aghọta ihe okpukpe ọ bụla dị ka ya. A nabata m na ọ gaghị ekwe omume m ịghọta ma ọlị; kama kama, m na-agbal ịsọpụrụ ndị m na-anaghị aghọta.
Onye ọ bụla dị iche ọ bụkwa ọdịiche anyị niile mere anyị ji dị iche na onyinye sitere na Chukwu. Ahụrụ m ọdịiche dị iche iche n'ọdịbendị, agbụrụ, okpukperechi, mmekọahụ, akụnụba… ihe niile gbasara ha. Ikekwe ọ bụ otu n'ime ihe mere m ji hụ nri n'anya nke ukwuu… flavors nke ọdịbendị dị iche iche (Indian, Chinese, Taiwanese, Italian, Soul Food, Polish, Ukrainian… mmm) dị ịtụnanya. Egwu m na-atọkarị otu… ị ga - ahụ m ka m na-ege NotIG BIG, ndị Tenors atọ ahụ, Mudvayne ma ọ bụ Babes na Toyland… na ihe niile dị n’etiti ha. (Ọ bụ ezie na m ga-ekweta na enweghị m ụtọ maka mba).
Doublekpụrụ abụọ bụ akụkụ nke ndụ. Income tax rates, SAT scores, nkwarụ nkwarụ hand ị na-akpọ ya na e nwere ihe a abụọ ọkọlọtọ maka ya. Kpụrụ abụọ abụghị ihe ọjọọ… onye ọ bụla dị iche na ụkpụrụ dị iche iche kwesịrị ide. Anụla m ma hụ ụfọdụ ndị chọrọ itinye otu ụkpụrụ ahụ n'ọrụ nke wepụrụ Imus n'ọrụ ma tinye ya na hip-hop ma ọ bụ ndị comedians.
IMHO, e nwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti ịkatọ otu ndị otu okwu agbụrụ gbasara ịkpa ọchị ma ọ bụ ịkọwa izugbe banyere ọtụtụ. Mee egwuregwu banyere ndị mara abụba na m ga-abụ onye mbụ chịrị ọchị ma gwa onye ọzọ egwuregwu ahụ… mana mee ka abụba abụba bụrụ ihe ga-ewute m na nke ahụ dị iche (ọ bụ ezie na m ka nwere ike ịchị ọchị ma gwa onye ọzọ). Anụla m njakịrị gbasara Conservatives, Liberals, Juu, Ndị Kraịst, Blacks, Whites, Asians, Arab, wdg ndị na-hilarious oro ha ji ịtọ ọchị na-ekwubiga okwu ókè banyere okwu a mana ha anaghị agbasa stereotype ahụ n'ụzọ na-emerụ ahụ.
Ihe dị iche bụ ma ebumnuche anyị bụ imejọ ma ọ bụ nyere nghọta anyị banyere ibe anyị. Mgbe ụfọdụ nke ahụ bụ ihe nghọta, mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe anyị kwesịrị ịmara. Enweghị ahịrị na aja. Ihe nwere ike ịbụ ihe ọchị nye otu onye ma bụrụ nke na-emerụ ahụ onye ọzọ.
Nke ahụ kwuru, "Enwere m mgbe m gafere ahịrị?". Eeh, kpam-kpam… na m kwara mmakwaara ozugbo wee nwee nwute maka ya. Ekwetaghị m na m bụ onye ajọ mmadụ, mana m bụ nwata ma amataghị ndị ọzọ. Iwu atọ ndị a bụ ihe m rụrụ ọrụ iji nye ụmụaka m isi mmalite karịa ka m nwere.
Ọ bụrụ na ndị mmadụ mụta ịmata ọdịiche anyị, na-asọpụrụ ma na-anabata ha, achọrọ m n'eziokwu na ụwa a ga-abụ ebe dị mfe karị ibi.
Daalụ JD maka mmụọ nsọ m dere nke a.
Ihe ịrịba ama 25 nwere ike ịnwe Nsogbu ederede
Isi okwu gị bụ ihe m chọrọ ka mmadụ niile ghọta. Thezọ kachasị mma iji nweta nghọta nke otu ndị mmadụ, okpukperechi, ma ọ bụ ihe ọ bụla dị iche na onwe gị bụ itinye uche ghere oghe, ịkwanyere nkwenkwe ha ùgwù na ịghara ịmanye gị usoro gị. Akwa post.
Anyi kwesiri i mee emume ndi iche anyi. Enwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye ibe anyị. Njem bụ otu n’ime ihe ndị kacha emeghe anya iji mee. Dị ka onye America, Akpata oyi wụrụ m mgbe m gara mba dị iche iche wee chọpụta na ọtụtụ ụwa emepeela. Anyị nwere àgwà na USA bụ naanị otu, mana enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ. Otu ihe ahu bu ihe oriri na Agburu. Enwere ọtụtụ ihe ọma. Ọ na-atọ m ụtọ iso ndị na-akpa ókè agbụrụ na ịmara ha. Mụ na ndị ọ na-amachaghị ihe na-emekọrịta ihe. Mkparịta ụka nkwanye ùgwù dị mma, ịkpọasị adịghị mma. Ezigbo ọrụ Doug
Ọtụtụ ndị mmadụ na-agbaso ọnọdụ Imus na-efe ọkọlọtọ nke Free Speech, na-ekwu na ịgbanye ya abụghị onye America.
Echere m na anyị na-echefukarị na okwu Imus na-echekwa. Ọ naghị ewepụ aka na aka ya, ma ọ bụ nọrọ n’ụlọ nga n’ihi ihe o kwuru. Nke ahụ bụ usoro iwu niile nyere.
E nwere ọdịiche dị n'etiti okwu echekwara na nsonaazụ nke ikwu ihe enweghị mmasị na iji okwu echedoro.
Onweghi onye ga ewe iku Imus ma oburu na ha achoghi. Ọ dịghị onye kwesịrị ịgwa ya okwu, na-ege ya ntị, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ọ na-akwụ ụgwọ ihe ga-esi na ya pụta (nke ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị) maka okwu o kwuru site na iji okwu echedoro ya.
Kedu ezigbo ka ị si kwuo Mr. Karr. Asi m na i rapara n’ihe i di na nti. Ndị a bụ ụdị archasị "Kumbaya" siri ike m na-ese okwu na ya, na ihe m na-ekwenye na ọtụtụ n'ime nsogbu obodo anyị.
Akwụkwọ ozi ederede nye Mr. Karr
M ga-agwa ndị niile na-agụ akwụkwọ ka ha soro jikọta na post ET Cook ka gua azịza m. Ọ bụ isiokwu kwesịrị ikwurịta, nke ahụ doro anya. Nke a bụ ụdị isiokwu mmadụ niile nwere mmasị izere ugbu a.
Gbachi nkịtị na-ewute anyị - anyị kwesịrị ịkọwa ya.
Daalụ maka nkwanye ùgwù nkwanye ugwu Maazị Karr. Eji m obiọma zaghachi gị okwu.